Vaky trano tany Fianarantsoa ::Solosaina sy fitaovana maro voaroba tao amin’ny biraon’ny Cisco • AoRaha
Vaky trano tany Fianarantsoa Solosaina sy fitaovana maro voaroba tao amin’ny biraon’ny Cisco
Norobain’olon-tsy fantatra ny biraon’ny Fari-piadidiampampianarana na Cisco Lalangina sy Vohibato, izay mifanakaiky amin’ny lapan’ny Fitsarana Tsianolondroa, any Fianarantsoa. Tombanana ho tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo no nisian’ny vaky trano.
Tamin’ny alatsinainy maraina no nahitana ny birao voaroba. Very ny solosaina dimy miaraka amin’ny fitaovana maromaro hafa momba ny infôrmatika. Tsy mbola misy ny olona voasambotra na voatazon’ny mpitandro filaminana tamin’izao halatra izao. Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny polisy any Fianarantsoa.
Gaga ny mpiasa tonga maraina tamin’ny fahitana ny birao nivoha. Nikorontana sy nisy banga ny entana tao amin’ny birao. “Tsy nopitsohina ny varavarana fa fanalahidy mahavaha azy no nampiasain’ireo olon-dratsy. Teo amin’ny varavarana io fanalahidy io. Efitra telo tao amin’ny biraon’ny Cisco no nidiran’ ireo mpangalatra sy nakana entana”, araka ny nambaran’ ny polisy nanao ny fizahana tany an-toerana.
Voalaza fa misy mpiambina eo amin’ny manodidina saingy milaza ho tsy naheno sy nahatsikaritra zavatra hafahafa. “Tonga nametraka fitoriana ny lehiben’ny Cisco, tamin’ny maraina (Ndrl: omaly maraina). Eo am-panaovana ny fanadihadiana lalina izahay”, hoy ihany ny mpanao famotorana.
Fandikana ny fitsipika fivezivezena :: Mpiasa maromaro naiditra fonja kely
Asa ratsy an-dalambe :: Andian-dehilahy mirongo basy mandroba mpitondra môtô